Daawo Sawirro: Madaxweyne Afrikaan ah oo Wiilkiisa Dalacsiiyay lana doonaya in uu xilka ka badalo - Warkii.com-News and information about Somalia
Daawo Sawirro: Madaxweyne Afrikaan ah oo Wiilkiisa Dalacsiiyay lana doonaya in uu xilka ka badalo
Madaxweynaha dalka Ugandha, Yoweri Museven ayaa lagu soo waramayaa in uu dalacsiiyay Wiilkiisa curudka ah ee lagu magacaabo Gaashaanle Sare Muhoozi Kainerugaba, waxa uuna ka dhigay lataliyaha gaarka ah ee madaxtooyada.
Wiilka Madaxweyne Museveni Gaashaanle Sare Muhoozi Kainerugaba, oo 42 sano jir ah, ayaa ahaa taliyaha ciidamada sida gaarka ah u tababaran iyo ilaalada aabihii tan iyo sanadkii 2008dii, waxa uuna hada u badashay in uu noqdo la taliye sare.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Madaxweynaha dalka Uganda oo hada jira 72-sano uu qorsheenayo in xilka uu ka badalo wiilkiisa, waxaana xilka uu hada u magacaabay lagu tilmaamay mid lagu kordhinayo khibradiisa.
Muhoozi Kainerugaba, ayaa wax kasoo bartay machadka militariga ee boqortooyada UK, sanadkii 2000. ka dib, 2016-kii ayaana laga dhigay Gaashaanle Sare, waxa uuna marba marka kasii dambeysa uu ahaa wiilkan mid darajadiisa uu sii dalacayo.
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa kamid ah Hogaamiyaasha ugu xukunka dheer ee qaarada Afrika, waxa uuna talada dalka Uganda la wareegay sanadkii 1986-dii, waxaana dhawaan loo doortay in dalka uu mar kale sii hogaamiyo.